Nauèio - クロアチア語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: nauèio (クロアチア語 - ビルマ語)
Dobro mi je to sam ponien da bih tvoja nauèio pravila.
အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို သွန်သင်တော်မူသော အခါ၊ အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည် ချီးမွမ်းခြင်းကို မြွက်ဆို ပါမည်။
to æe reæi kada ti se nametnu kao gospodari tvoji oni koje si sam nauèio da te kao ljubavnici vode. Neæe li te bolovi spopasti kao porodilju?
သင်သည် ဆုံးမတော်မူခြင်းကို ခံရသောအခါ၊ အဘယ်သို့ ပြောလိမ့်မည်နည်း။ သူတို့သည် သင့်ကို အစိုးတရပြုစေခြင်းငှါ၊ သင်သည် ကိုယ်တိုင်အကြံပေးပြီး။ သားဘွားသော မိန်းမခံရသော ဝေဒနာကို သင်ခံရလိမ့် မည်မဟုတ်လော။
S kim se on posvjetova, tko je njemu mudrost ulio, nauèio ga putovima pravde? Tko li ga je nauèio znanju, pokazao mu put k umnosti?
အဘယ်သူနှင့် တိုင်ပင်တော်မူသနည်း။ ထိုဘုရားကို အဘယ်သူ သွန်သင်သနည်း။ ထိုဘုရားအား တရားလမ်းကို ပြသောသူ၊ ပညာနည်းကို ပေးသောသူ၊ ဥာဏ်လမ်းကို ညွှန်သောသူကား အဘယ်သူနည်း။
Isus im nato reèe: "Kad uzdignete Sina Èovjeèjega, tada æete upoznati da Ja jesam i da sam od sebe ne èinim nita, nego da onako zborim kako me nauèio Otac.
ထိုကြောင့်ယေရှုက၊ သင်တို့သည် လူသားကိုမြှောက်ထားသောအခါ၊ ငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည် ကို၎င်း၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုအလျောက် အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုဘဲ၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါအား နည်းပေးတော် မူသည်အတိုင်း ငါဟောပြောသည်ကို၎င်း သင်တို့သည် သိကြလိမ့်မည်။
Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Èim presta, reèe mu jedan od uèenika: "Gospodine, nauèi nas moliti kao to je i Ivan nauèio svoje uèenike."
တရံရောအခါ ကိုယ်တော်သည် တစုံတခုသောအရပ်တွင် ဆုတောင်းတော်မူပြီးလျှင်၊ တပည့်တော် တ ယောက်က၊ သခင်၊ ဆုတောင်းစေခြင်းငှါ ယောဟန်သည်မိမိတပည့်တို့အား နည်းပေးသကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့အား နည်းပေးတော်မူပါဟု လျှောက်သော်၊
ernährungsspezifischen (ドイツ語>ポルトガル語)kameraet (デンマーク語>ベトナム語)jam (エスペラント語>英語)ah oui il vient de remonter (フランス語>英語)也有不少批评卢拉外交政策的声音 (簡体字中国語>ベトナム語)paljon (フィンランド語>アルバニア語)valuable (英語>ヒンズー語)effek van droogte (アフリカーンス語>英語)inexécution (フランス語>オランダ語)nandito na ako english (タガログ語>英語)启动对匈牙利的处罚 (簡体字中国語>タイ語)timor (英語>韓国語)quiero que me toques rico papi (スペイン語>英語)kya karta hoon (ヒンズー語>英語)cihlářová (チェコ語>タジク語)picture of sukog (タガログ語>英語)essay on nature uses in telugu language (英語>テルグ語)karangan gotong royong di sekolah (マレー語>英語)putol ko (タガログ語>英語)watashi no jinsei (日本語>英語)at mag seselpi (タガログ語>英語)pagkahalangdon (セブアノ語>チャモロ語)remitte (ラテン語>英語)humanitaarkriiside (エストニア語>ハンガリー語)etisalat (フランス語>スペイン語)